Xaaladihii dhimasho ee ugu yaabka badnaa kuwaasoo aduunka ka dhacay. – Filimside.net
Xaaladihii dhimasho ee ugu yaabka badnaa kuwaasoo aduunka ka dhacay.
Taariikhda aduunkaan waxaa jiraan xaalado dhimasho oo layaab leh qaarkoodna waxay u dhaceen si qariib ah oo qofna maleysan Karin.
Hadaba bahda filimside waxay isku howshay iney qaar kamid ah xaaladahaas idiin soo qorto.
Halkaan hoose ka akhriso xaaladihii dhimasho ee ugu yaabka badnaa.
=1875tii ayaa waxaa dhacday inuu geeriyooday nin ka shaqeynaayay warshad kadib markii dooli afka ka galay.
Dooliga oo warshada ku dhex jiray ayaa waxaa arkay qaar kamid ah shaqaalaha warshada waxayna gudo galeen iney bursadaan si ay u dilaan hase yeeshee mid iyaga kamid ay ayuu dharka u galay taasoo kaliftay in ninkii kor u qeyliyo hase yeeshee dooligii oo baxsad ah ayaa afka ka galay kadibna dhuunta u istaagay.
Ninkii oo neefta ku ceshoontay ayaa halkii ku geeriyooday.
=sanadkii 1926dii dalka Australia ayaa waxaa dhacday in labo wiil oo saaxiibo ah ku heshiiyeen iney shimbir geed u dhaw saarnaa dilaan lkn layaab waxay noqotay markii shimbirkii mid kamid ah wiilashii weerar kusoo qaaday asigoona gooyay xididka halbowlaha ee dhuunta mara taasoo kaliftay in wiilkii dhiig baxo meeshiina ku geeriyoodo.
=nin qoraa ahaa una dhashay wadanka Scotland ayaa waxaa loo sheegay in Charleskii labaad uu boqor noqday taasoo kaliftay in ninkii qosol la dhaco waliba mid aan kala joogsi laheyn lkn nasiib xumo qosolkii ayuu u geeriyooday.